Hab dhaqanka hadalka Jimmie Åkesson waa hab siyaasadeeysan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tomas Ramberg, laanta ekot iyo Jimmie Åkesson, hoggaamiyaha SD. sawir: TT/SR
Hab dhaqanka hadalka Jimmie Åkesson waa hab siyaasadeeysan
La daabacay torsdag 16 augusti 2018 kl 13.29
Wareeysigii laanta wararka Ekot la yeelatay hoggaamiyaha xisbiga Sverigedemokraterna Jimmie Åkesson iyo in aanu ka bixin jawaabo cad cad waxey qayb ka yihiin siyaasadda xisbiga SD, sida uu sheegay Tomas Ramberg oo ekot uga faallooda siyaasadda arrimmaha gudaha.
Hoggaanka Sverigedemokraterna ayaa lagu dhaleeceeyaa in aanay su’aalaha ka bixin jawaabo waafi ah, middaasina loo sharxo in aaney dooneyn, hase yeeshee xaqiiqdu tahay hab uu isticmaalo Åkesson iyo dhambaal siyaasadeed. Xisbiga Sverigedemokraterna ayaa ku calaamadeeya inuu iska fogeeynayo siyaasadda xisbiyada kale oo aannu go’aan cad ka qaadan. Fikirka la gudbineyaana uu yahay wax laga tagey oo aan macne ku fadhiyin.
Waa mid laga dheehan karay wareeysigii maanta lala yeeshey ee la xiriirey siyaasadda cimilada.
Siyaasadda cimilada ee Jimmie Åkesson ayaa ka soo hor jeedda dhammaan go’aammadii siyaasadda cimilada ee xisbiyada kale, laakiin sida uu aamin-san yahay Åkesson maadaama aanay suurtagal ahayn in la hir geliyo xeerka cimilada aannu waxba soo kordhin doonin ama dhammaan la wada jebin doono. Sidaa daraadeed wax macne ah kuma fadhiyo xeerkaasi inuu jiro iyo in kale.
Waxaa middaa la mid ah heshiiskii cimilada ee lagu gaarey magaalada Paariis. Iyadoona uu xisbiga SD, ka soo hor jeestay in baarlamanku ansixiyo, isla markaana aanu xisbigu ku howlanayn sidii Sweden uga bixi lahayd heshiiskaa. Inkasta oo Jimmie Åkesson uu dhaleeceeyay heshiiska, waxaa fikirkiisa loo fahmi karaa ”iska daaya xisbiyada kale ha isku mashquuliyaane”.
Sverigedemokraterna uma muuqato in baahi loo qabo dardar gelinta dhimista wasakhda uu dalkani cimilada ku sii daayo, hase yeeshee wuxuu xisbigu doonayaa in dhaqaale la geliyo waddammada kale iney howlahaa ka shaqeeyaan. Xisbigu wuxuu sidoo kale soo jeediyay tusaale ahaan maalgelin in lagu sameeyo warshadaha tamarta ee ku shaqeeya quwadda Atoomikada, middaasina lagu macneeyey inay cimilada u wanaagsan tahay. Xisbiga SD wuxuu doonayaa inuu gacan ka siiyo shirkadda dawliga ee Vattenfall inay maal-geliso sidii loo sii wadi lahaa laba ka mid ah mashiin quwadeedka (reaktor) Ringhals.
Miisaaniyadda ku kici doonta ayaannu caddeeyn Åkesson in laga bixin doono cashuurta bulshada laga qaado ama macaamiisha korontada.
Doorashada dabadeed ayay xisbiga kala soo gudboonaan doontaa caqabad su’aasha udub dhexaadka u ah xisbiga – su’aasha la xiriirta siyaasadda socdaalka. Waxay u muuqataa in aqlabiyad xubnaha baarlamanku ey isku raaci doonaan in baaris loo saaro siyaasadda fog ee socdaalka, halka midda iminka ee ku meel gaarka ah la dheereeyn doono.
Waxaa wax is burinaya ahayd inuu hoggaamiyaha xisbiga Sverigedemokraterna Jimmie Åkesson uu culeeyska ugu weeynaa ee wareeysiga ka dareemayay kolkii la gaaray fikirka xisbiga aasaaska u ah. Kolkii uu bayaanin lahaa siyaasadda isku milanka – assimilation ee xisbiga, iswiidhish ahaanta – middaasina oo barnaamijka xisbiga lagu magacaabo – individens nedärvda "essens – dhaxalka shakhsiyanka ah ee qofka ku dhex jira, uu la dhasho". Markaasina oo la dareemayay inuu hoggaamiyaha SD jeclaystay in laga baxo oo maaddo kale laga wareeysto.